Diabe 700-Kilometatra Ho An’ireo Olona Nanjavona Ao Balochistan, Pakistana · Global Voices teny Malagasy
Diabe 700-Kilometatra Ho An'ireo Olona Nanjavona Ao Balochistan, Pakistana
Voadika ny 05 Novambra 2013 23:15 GMT
Niteraka voka-dratsy mihoson-drà ny tolon'ireo mpitaky ny fisintahana tao Balochistan, faritra midadasika sy mahantra indrindra ao Pakistan nandritra izay sivy taona lasa izay, sivily maherin'ny 2.000 sy mpitandro ny filaminana teo amin'ny 700 teo ary mpiady 500 no namoy ny ainy. Saingy tsy ny vono olona ihany no nihatra tamin'ireo mponina ao amin'ny faritra – nandritra izany fotoana izany, Baloch an'arivony no nanjavona tsy nisy fanazavana.
#VBMPLongMarch, Pikantsary avy amin'ny Lahatsarin'ny Feo Iraisam-pirenena ho an'ireo olona Baloch nanjavona
Mba hanoherana ny fankàna ankeriny , vondrona ahitana olona 20 eo ho eo, izay vehivavy ny ankamaroany no nikarakara diabe eo amin'ny 700 kilometatra eo miala ao Quetta, renivohitr'i Balochistan mankao Sindh, renivohitr'i Karachi tamin'ny 27 Oktobra 2013. Anisan'ny mpikambana ao amin'ny Feo ho an'ireo Olona Baloch Nanjavona (VBMP) ireo mpanao diabe, izay nanangana toby fihetsiketsehana ao Quetta nandritra ny telo taona sy tapany (jereo ny (lahatsoratra tao amin'ny GV) ary hamindra ny toby ao Karachi amin'ny fiafaran'ny diabe.
Handeha an-tongotra manomboka amin'ny enina maraina hatramin'ny enina hariva ireo mpanao fihetsiketsehana mandra-pahatongan'izy ireo eny amin'ny toerana fahatongavany. Mitondra afisy sy sora-baventy feno fihetseham-po ahitana teny filamatra izy ireo: tahaka ny hoe “atsaharo ny famonoana ireo mpitolona ara-politika Baloch” sy hoe «manameloka ny vono-olona tsy miakatra fitsarana izahay”..
Araka ny filazan'ny Feo Iraisam-pirenena momba ireo Olona Baloch Nanjavona ( IVBMP ). Farafahakeliny Baloch 18 000 no nalaina an-keriny teo anelanelan'ny taona 2001 sy 2013, ary mbola tsy fantatra izay misy azy ireo ankehitriny. “Havana sy namana akaiky marobe an'ireo mpikambana ao amin'ny VBMP sy Baloch an'arivony hafa no mifonja ao an-tranomaizin'ny fampijaliana ankehitriny ary an-jatony ireo namoy ny ainy tao am-ponja”, araka ny filazan'ireo mpikambana nandritra ny valan-dresaka hoan'ny mpanao gazety tao amin'ny ivon-toeran-gazety ao Quetta, izay toerana nisy ny tobim-pihetsiketsehana talohan'ny diabe.
Tao anatin'izany valandresaka izany ihany, nampitandrina ny VBMP fa raha misy zavatra mihatra amin'izy ireo mandritra ny diany mankany Karachi, dia ny governemantam-paritra no tompon'andraikitra.
Mangatsiaka ny fifandraisana eo amin'ny hetsiky ny mpitaky ny fahaleovantena Baloch sy ny governemanta. Nanambara ny Minisitra lehiben'ny governemanta Balochistana, Dr Malik Baloch, vao haingana fa hisy ny fampiantsoana fifampidinihana handraisan'ny antoko maro anjara mba hiresahana ny fomba hampitsaharana ny fitroarana manjaka ao Balochistan, voamariky ny fikomiana sy ny fitomboan'ny fifanafihan'ny antokom-pivavahana samihafa. Na dia izany aza, nitsipaka ny fifampidinihana karakarain'ny governemanta ireo vondrona Baloch mpanohitra, ary nanasokajy izany ho teti-dratsy hanimbàna ny tolon'i Baloch.
Tao amin'ny media sosialy, naneho ny fanohanany ny diabe ireo mpikatroka. Fikambanana nasionalista Sindhi Jeay Sindh Muttahida Mahaz (JSMM) nanoratra hoe:
Nanambara ny fanohanany ny #VBMPLongMarch ny #JSMM. Hiarahaba an'i Mama Qadeer Baloch tongasoa ao Karachi ireo mpikatroka. Hoy ny Filohan'ny #JSMM
Naneho hevitra tamin'ny alalan'ny teny ifankafantarana #VBMPLongMarch (Diabe Lavitr'ezaka ataon'ny VBMP) ireo mpiserasera:
Maily (kilometatra sy tapany) an-jatony, olona an'arivony, tantaran'ny fangirifiriana sy fialàna aina maherin'ny an-tapitrisany. Tohano ny #VBMPLongMarch hiaro ny maha-olombelona sy ny rariny.
Mpianatra asa fanaovan-gazety sy mpikatroka ny zon'olombelona Faiz M Baluch (@FaizMBaluch) nisioka sarinà mpanao fihetsiketsehana iray:
Nandray anjara tamin'ny #VBMPLongMarch ny zanaka lahin'i Shaheed Jalil Reki, te hahafantatra izay namono ny rainy izy?
Ghaffar Baloch (@Alhaan_) nangataka tamin'ireo mpamaky mba hipetraka eo amin'ny toeran'ireo fianakavian'ny lasibatra:
Hevero fotsiny ny tenanao! Ahoana ny fihetseham-ponao raha nanjavona tsy hita ny olona maminao indrindra ary tsy fantatrao mihitsy ny momba azy? Tohano ny #VBMPLongMarch
Mpanao gazety Boriwal Kakar (@BoriwalKakar) nanaparitaka ny vaovao:
Manao diabe ho amin'ny fahalalahan'i #Kashmir ny #Punjabis ao #Pakistan ary manao diabe ny #Balochs mba hahitana indray ireo havany sy namany akainy an-1000 nanjavona. # VBMPLongMarch
Tamin'ny 30 Oktobra 2013, andro faha-efatry ny diabe, tonga tao amin'ny faritra Manguchar ao amin'ny distrikan'i Kalat ao Balochistan ireo mpanao fihetsiketsehana. Hamdan Baluch (@HamdanBaluch) nitatitra hoe:
Andro faha-efatra nitolomana hoan'ny Olona BAloch , tonga tao #Balochistan ny diabe lavitr'ezaka
Iangaviana ianao hanaraka ny pejy Facebookn'ny Bramsh News Media sy ny teny ifankafantarana #VBMPLongMarch ao amin'ny Twitter raha te hanara-baovao farany momba ny diabe.
Soratra miverina: #GVMeetup Karachi: Mahita Fianakaviana Amin’ny Toerana Tsy Ampoizina · Global Voices teny Malagasy
[…] fotoana nahavariana ahy indrindra. Nanontany ny mpanolotra iray, “Fantatrareo ve fa nisy ny diabe 700 kilaometatra omaly ho an'ireo olona nanjavona tao Balochistan [mg] [faritany]?” dia nisaina aho hoe, “Oadray! Oah. Fa nahoana aho no tsy namaky izany […]
18 Novambra 2013, 01:07